Gabriela Mistral. Nhetembo mbiri pagore rekufa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Gabriela Mistral. 2 nhetembo pagore rekufa kwake
Gabriela Mistral, nyanduri wekuChile anozivikanwa zvikuru uye Mubayiro weNobel muMabhuku mu 1945, akafa zuva rakaita sezuva ra 1957 MuNew York. Akazvipira kwete kubasa rake chete, asi kune rake rehukama basa se kupararira kwetsika uye yake kurwira kururamisira kwevanhu uye kodzero dzevanhu. Mukurangarira kwake ndinorangarira maviri enhetembo dzake, Besos y Mukadzi akasimba.
2 2 nhetembo
2.1 Mukadzi akasimba
Su zita chairo Era Lucila weMaria wePerpetual Rubatsiro Godoy Alcayaga, asi aizivikanwa nezita rake rekunyepedzera, raikurudzira basa ra Gabriel D'Annunzio uye Fréderic mistral.
Waive mudzidzisi wekumaruwa uye vanobatsirana muzvinyorwa zvinyorwa uye zvavo zvinyorwa zvekutanga vakaonekwa mukutanga kwezana ramakore rechiXNUMX mumabhuku emuno. Akanyorawo zvemagazini Runako, ndiani akatungamira Ruben Dario. Izvo zvakare ipapo iyo iyo Yenyika Nhetembo Mubairo weChile.
mistral akafamba nenyika dzakawanda senge Mexico, United States, Switzerland, Italy kana Spain, kwaakange ari mumiriri weChile muMadrid mukutanga kwema30. Iyo nguva semumiriri ichamuendesa kuPortugal, France kana Brazil, pakati pedzimwe nzvimbo. Basa rake rinoturikirwa mukati mitauro inodarika zana. Mamwe mazita ari Dongo, Kuverengera vakadzi, Unyoro, Iwo mahoneti erufu uye mamwe madetembo eneregiac, notes o Winery.
Ndinoyeuka chiso chako chakange chakamisikidzwa mumazuva angu,
mukadzi ane siketi yebhuruu nehuma yakashongedzwa,
kuti muhudiki hwangu uye pane yangu nyika yeambrosia
Ndakaona mugero mutema wakavhurwa munaApril aipisa.
Akasimudza mutabhera, pakadzika, mukombe usina kuchena
uyo akasungira mwanakomana pachipfuva cheruva,
uye pasi peyeuko, kuti kwaive kupisa kwauri,
mbeu yakawira kubva paruoko rwako, yakanyarara.
Kukohwa ndakaona gorosi remwanakomana wako muna Ndira,
uye ndisingatarisi meso angu ndakakutarira,
yakakwidziridzwa kune vaviri vacho, yekushamisika uye kuchema.
Uye dope patsoka dzako richaramba richitsvoda
nekuti pakati pezana remadhizaini handina kuwana kumeso kwako
Uye ini ndichiri kukutevera mumakomba mumvuri nerwiyo rwangu!
Kune kutsvoda kwavanotaura ivo pachavo
mutongo werudo wekupa mhosva,
kune kutsvoda kunopihwa nekutaridzika
kune kutsvoda kunopihwa nendangariro.
Kune kutsvoda chinyararire, kutsvoda kwakanaka
kune enigmatic kutsvoda, kwechokwadi
kune kutsvoda kunopa mweya chete
kune kutsvoda kwakarambidzwa, chokwadi.
Kune kutsvoda kunopisa nekukuvadza,
kune kutsvoda kunobvisa pfungwa,
kune kutsvoda kusinganzwisisike kwakasiiwa
chiuru chekudzungaira uye kurasa hope.
Kune kutsvoda kunonetsa kunovhara
kiyi isina anoziva,
kune kutsvoda kunokonzera dambudziko
mangani emabhurocha maruva akashatisa.
Kune anonhuwirira kutsvoda, anodziya kutsvoda
iyo inoputika mukushuva kwepedyo,
kune kutsvoda kunosiya zvisaririra pamuromo
semunda wezuva pakati pemazaya maviri echando.
Kune kutsvoda kunoita kunge maruva
yezvakanaka, isina ruzivo uye yakachena,
kune kutsvoda kunonyengera uye kwoumbwende,
kune kutsvoda uye kunyepa kwekunyepa.
Judhasi anotsvoda Jesu ndokusiya akadhindwa
pamberi pake Mwari, huipi,
uku Magdalena nekutsvoda kwake
nekuzvipira simbisa kurwadziwa kwake.
Kubva ipapo mukutsvoda kunorova
rudo, kutengesa uye kurwadziwa,
mumichato yevanhu vanotaridzika zvakafanana
kumhepo inotamba nemaruva.
Kune kutsvoda kunogadzira ravings
yeanotyisa uye anopenga kuda,
unovaziva zvakanaka, ivo kutsvoda kwangu
Yakagadzirwa neni, yemuromo wako.
Llama anotsvoda izvo zvakadhindwa trace
vanotakura mihoronga yerudo rwakarambidzwa,
kutsvoda kwedutu, kutsvoda kwemusango
iyo chete miromo yedu yakaravira.
Unoyeuka here yekutanga ...? Hazvitsananguriki;
yakafukidza kumeso kwako nerakajeka blushes
uye mukukanganiswa kwekutambudzika,
maziso ako akazara nemisodzi.
Unoyeuka here kuti imwe masikati mumashure kupenga
Ndakakuona uine godo uchifungidzira zvichemo,
Ndakakusimudza mumaoko angu ... kutsvoda kwakazununguswa,
uye chii chawakaona mushure ...? Ropa pamiromo yangu.
Ndakakudzidzisa kutsvoda: kutsvoda kutsvoda
vane moyo usingapfuure wedombo,
Ndakakudzidzisa kutsvoda nekiss dzangu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Gabriela Mistral. 2 nhetembo pagore rekufa kwake
Zvizvarwa zvitsva zvinoverenga zvishoma here?